Njengoba lungenye yezinto ezidume kakhulu okwamanje ukwenziwa ezicijile obuqinile akunasidingo yesondlo - lokhu yensimbi. Ezicijile metallicheskienevozmozhno goba, smash noma ukuchitha. Kodwa nangaphandle kwalezi zinto izici best, isithiyo esinjalo sesikhona aphakeme - nzima yensimbi kocingo ungakwazi ukwengeza umklami filigree izingxenye nezinto ekwakheni. Ngo usebenzisa amaqhinga anjalo angase anikeze imvume esesabekayo kocingo umphumela engokwemvelo kanye khulula. Metal ezicijile angadingi yesondlo kakhulu, hhayi kuhlanganise prokraski unomphela bese enamathela anti-ukugqwala zomuthi, zingabantu eside futhi isikhathi eside iyasebenza.
Kuye imisebenzi uzibekela ngokukhetha uthango isayithi, insimbi kuyakhethwa. Uma kudingekile sivinjelwe ngokuphelele ukuzihlanganisa prying amehlo, ke abunaphutha kanjani ukuthola kuleli cala zinc camera ishidi noma profiled uhlobo abayizimpumputhe. Bayakubeka kuyisivikelo esiqinile umoya umsindo. Ezicijile ezensimbi, kungenziwa ashiselwe futhi zakhiwa. Ziyakwazi look nenhle kakhulu futhi zokuhlobisa nge wenza zezitini itshe zezinsika angena njalo ukubonakala endlini. metal ezicijile ne izingxenye UKWAKHA unamakhono - akuyona ezishibhile, ngakho abathengi ngokuvamile usebenzise leli fomu kuphela ukuhlobisa mbumbulu kwezindlu. Ngokungangabazeki, ukukhiqizwa mikhiqizo - kuwumsebenzi onzima. Futhi izindleko Yiqiniso, eqolo ngaphezu kwanoma, isibonelo, enze ocingweni lamapulangwe. Futhi, ezokukhiqiza kanye ukufakwa izindleko uthango ezinjalo ngenxa nobunye bomuntu ngamunye ezinhlelo imidwebo (umklami izikebhe umklami), kanye yinkimbinkimbi ukufakwa (ashiselwe wokuzimisela, ukulungiselela kwesisekelo). Buyela odongeni kulungiselelwa metal has nomthelela obalulekile olandelayo isimo izivikelo. ubuchwepheshe ezimbili ukufakwa enjalo ezicijile esetshenziswa namuhla - is concreting lamakholomu futhi ngaphandle concreting. Ukukhethwa obandayo wesifunda wenza Shopper siqu, kodwa nganoma yisiphi ukhetho - izigxobo ziyadingeka alunge impahla anticorrosive futhi phezu ivaliwe isivalo, ukuze kuvikelwe ipayipi kusukela izinqubo sezulu ukuthi kungadala namachibi kwanoma kwensimbi. Olunye uhlobo yensimbi uthango kocingo ebhodi lukathayela.
a impahla okunjalo metal akuyona eliphansi in ukuzinza, amandla nokuqina kwayo. kocingo okunjalo kuyinto eyodwa esihle kakhulu iziza suburban. Ufihla emehlweni prying, ivikela kusukela ayehlasela izilwane ezincane nezinkulu epulazini, ube okuhle umsindo ukwahlukanisa nokuvikelwa isiqinisekiso emoyeni kanye uthuli. uthango Okufanayo esayithini suburban bheka ezibalulekile, Uyakufanelekela, kodwa kanye awusebenzi bahlanganyele ukunakwa xaxa.
metal ezicijile metal amashidi kungenzeka ngokukhululekile ingasetshenziswa njengendlela kocingo yesikhashana izindawo ezihlukahlukene, ngokwesibonelo, abelwe ukwakhiwa noma zokulungisa.
Isixazululo of somlilo ebeka isitini: yezingxenye, ngezabelo, ukulungiselela
Kanjani ukubala indiza ka izitebhisi and lihlala?
Silicone iraba: Ukulungiselela, Properties futhi Izicelo
The izinto ezidumile ngendlela emangalisayo Hanover